musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kurwisa » Viking Cruises: Chii chitsva?
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Kurwisa • Press zvinoburitswa
Viking nhasi yazivisa ngarava yayo nyowani yegungwa, Viking Saturn®, ichabatana nekambani inohwina mubairo mukutanga kwegore ra2023.
Viking nhasi yazivisa ngarava yayo nyowani yegungwa, Viking Saturn®, ichajoinha makambani anohwina mubairo mukutanga kwegore ra2023. Ngarava ye930-yevashanyi ichapedza mwaka wayo wevasikana kufamba munzira nhatu muScandinavia nenyika dzeNordic, kusanganisira mbiri nzendo dzemazuva gumi nemashanu, Iconic Iceland, Greenland & Canada, uye Iceland & Arctic Explorer yeNorway, uye nemazuva makumi maviri nemapfumbamwe Greenland, Iceland, Norway & Beyond famba. Mukuwedzera kune matatu matsva mafambiro, Viking azivisa nhasi kuti kambani ichadzosa yakakurumbira-yezuva-8 Runako rweIceland rweIceland mafambiro kubva muna Nyamavhuvhu 2023.
“Zviuru zvevaenzi vakafamba nechikepe chedu Madzokoyi rwendo kuIceland zhizha rapfuura rakanakidzwa neruzivo zvakanyanya zvekuti vakapa ratidziro-yepamusoro, "akadaro Torstein Hagen, Sachigaro weViking. “Idzi nzendo nyowani dzakanakira vafambi vanoda kuziva uye nzira dzekutsvagisa vafambi vekutanga veViking kuenda kuIceland nekune dzimwe nzvimbo dzekuNorth Atlantic dzinozivikanwa nekunaka kwadzo. Tinotarisira kugamuchira Viking Saturn kuzvikepe zvedu uye kupa vaenzi dzimwe nzira dzekuongorora nzvimbo ino yakasarudzika takanyarara. ”
Nyowani uye Kudzoka 2023 Nordic Nzira:
Iconic Iceland, Greenland & Canada (ZVITSVA) - Iyi 15-mazuva ekufambisa anotenderera Iceland, Greenland nematunhu eCanada eNewfoundland neNova Scotia. Kufamba pakati peNew York City neReykjavik, vashanyi vanoyemura nzvimbo dzinoputika dzemakomo dzeWestman Islands, vanonakidzwa nehupenyu hwakadzikama muDjúpivogur, uye vanofamba mumigwagwa yemaguta anoyevedza seSeydisfjördur neAkureyri.
Iceland & Arctic Explorer yeNorway (ZVITSVA) - Parwendo urwu rwemazuva gumi neshanu, vashanyi vanozoona hupenyu kure kure kuchamhembe parwendo rwekuyambuka Arctic Circle uye nemumahombekombe ari kure eNorway neIceland. Mushure mekunakidzwa nekugara kwehusiku mukati Viking SaturnChiteshi chemba cheBergen, tevera tsoka dzeVikings apo iwe unoshanyira Honningvåg iri kure kuNorth Cape uye uchiongorora Longyearbyen, iri musha kune mamwe mabheya polar kupfuura vanhu.
Greenland, Iceland, Norway & Beyond (ZVITSVA) - Vashanyi vanogona zvakare kusarudza kusanganisa maviri matsva mafambiro eepic 29-zuva rwendo. Kubva kune yaimbova Hanseatic League guta reBergen, vashanyi vachatevera nzira yeVikings kuburikidza nenyika dzeScandinavia dzeNorway, Iceland neGreenland vasati vaenda kuCanada nekupedzisa muNew York.
Runako rweIceland rweIceland- Kudzokera muna 2023, rwendo urwu rwakakurumbira rwemazuva masere kubva kuReykjavik inoongorora mahombekombe makuru eIceland. Kufamba nechikepe Viking Star®, vashanyi vanosangana nerunako rusingaenzaniswi runako, vanopupurira mapopoma emvura uye pristine fjord nharaunda. Tevera mutsoka dzemunhu anoshinga kutsvaga anotsvaga Leif Eriksson, tarisa mhuka dzesango dzemuno uye nyudza mune zvakasikwa.
Ngarava dzeViking dzegungwa dzine huwandu hwakakura hwematani makumi mashanu nemazana masere nemazana masere, iine mazana mashanu ane makumi mashanu neshanu emitero inokwanisa kugamuchira vashanyi vanosvika mazana matatu nemakumi matatu. Viking's yekuhwina mubairo zvikepe zvegungwa zvinosanganisira Viking Star®, Viking Gungwa®,Viking Sky®,Viking Orion®, Viking Jupiter®uye Viking Venus®. Viking Mars®uyeViking Neptune®ajoina ngarava muna 2022; Viking Saturn ichajoina kutanga kwa2023.Classified neCruise Critic se "zvidiki ngarava," Viking yemakungwa ngarava inoratidzira yazvino yeScandinavia dhizaini ine yakanakisa kubata, nzvimbo dzepedyo uye kutarisisa kune zvakadzama. Pfungwa huru dzinosanganisira:
Zvese Veranda Staterooms: Vashanyi vanogona kusarudza kubva pamatanho mashanu emitero, kutanga kubva pa270 sq. LCD maTV ane mafirimu-on-kudiwa, yemahara Wi-Fi uye yekuhwina-inohwina yekugezera ine hombe mvura, premium Freyja® zvigadzirwa zvekugezera uye pasi panodziya.
Explorer Suites: Ngarava dzinosanganisira 14 Explorer Suites, ayo ari maviri-makamuri masuti anotangira kubva pa757 kusvika 1,163 sq. yevaenzi.
Puru Puru Sarudzo: Pamusoro pePuru Puru nedenga rinodzoserwa rinobvumidza chero-mwaka yekushambira, ngarava dzinoratidza yekutanga-ye-yayo-mhando girazi-inotsigirwa Infinity Pool yakadzvanyirirwa kubva kumashure, ichibvumira vashanyi kushambira vakakomberedzwa nekwavaenda.
LivNordic Spa: Mukuenderana neViking's Nordic nhaka, Iyo Spa iri mubhodhi yakagadzirirwa nehunyanzvi hwese hutano hweScandinavia mupfungwa-kubva mutsika-mazana emakore sauna kuenda kuChando Grotto uko machando echando anodzika zvinyoro-nyoro kubva mudenga nemhepo inotonhora.
Yevashanyi 'Lounge naMamsen's: Goverana jongwe neshamwari. Kunonoka pamusoro pekudya kwekuseni kweNorway uye bhuku renhoroondo yezvinyorwa. The Explorers 'Lounge uye Mamsen's gourmet deli inzvimbo dzinofungidzirwa dziri pauta hwechikepe uye yakagadzirirwa kumiririra mweya weScandinavia wekuzorora zvakakwana uye kushamisika pakuona kutsvaira kuburikidza nemawindows maviri-akareba.
Iyo Wintergarden: Vashanyi vari kutsvaga runyararo vachachiwana muWigardengarden. Munzvimbo ino inoyevedza pasi pechidzitiro cheScandinavia huni dzakachekererwa, vashanyi vanogona kuita masikati tii sevhisi.
Kudya Kudya: Ngarava dzeViking dzinopa sarudzo sere dzekudyira, dzese pasina muripo wekuwedzera kana muripo-kubva pakudya kwakanaka muThe Restaurant, iyo inopa chikafu chizere katatu uye dzakasiyana siyana zvekugadzirira, uye World Café, iyo inoratidzira mari yepasi rose uye hunyanzvi hwedunhu kusanganisira sushi uye yegungwa inotonhora bhawa-yekudyidzana neimwe nzira yekudyira paThe Chef's Tafura, iyo inopa yakawanda-kosi yekuravira menyu ine waini pairings, uye Manfredi's, iyo inoratidzira ichangobva kugadzirirwa pasita uye Italian inofarira. Iyo Pool Grill inonyanya kugadzirisa gourmet burger, nepo masikati tii uye scones zviripo muWintergarden. Mamsen anoshandira nzira yeNorway dhizaini, uye yekubatsira kwemaawa makumi maviri neshanu imba yekutendera inobvumidza vese vashanyi kunakidzwa nemasaini madhishi mukunyaradza kweiyo stateroom. Zvakare, nesarudzo dzakawanda dzekugara kwekunze panguva yekudya, ngarava dzeViking dzegungwa dzinopa zvakanyanya al fresco kudya mugungwa. Pamusoro pezvo, Iyo Kicheni Tafura inonyanya kugadzirisa mudunhu ndiro kubva kumusika kuenda patafura.
Tsika yekuvandudza: Zviitiko zveViking kubva kuchikepe kuenda kumahombekombe zvakagadzirirwa kuwana kusingaenzanisike uye kuvandudza tsika. Viking Resident Vanyori vezvakaitika kare vanounza yakakwira-chikamu chikamu nhoroondo uye yedzidzo tsika yakanangana nerwendo, ichipa ruzivo rwakakosha mune yakapfuma nhoroondo yekuenda. Vatauri vevaenzi avo vari nyanzvi muminda yavo vanojekesa hunyanzvi hwekuenda, kuvaka, mimhanzi, geopolitics, nyika yepanyama nezvimwe. Maitiro Ekuenda anomiririra hunyanzvi hwemagariro ekuita enharaunda iyi - ingave itari yekuItaly kana chiPutukezi fado. Vagari vemuClassical Musician - varidzi vemapiyano, varidzi vemagitare, vayorinoti uye varidzi vemafirita - vanoita nziyo dzekare mungarava dzese. Uye Culinary Makirasi muiyo Iyo Kicheni Tafura, Viking'sboardboard yekubika chikoro, tarisa pane yedunhu kicheni.
Kufuridzirwa kweNordic: Kunyangwe iwo madiki madiki anotora kufemerwa kwavo kubva kumweya wekutsvaga wemuVikings wekutanga, kuratidza zvakadzika zvakabatwa tsika dzeNordic. Chiedza chemuti wehuni, kubata kweslate uye teak, limestone yeSweden uye juniper inonhuhwirira inoonekwa munzvimbo dzeruzhinji neSpa. Iyo Clinker-yakavakwa dhizaini yeViking Bar inoratidzira iwo maitiro ekuvaka kweiyo yekutanga Viking Longships. Viking Heritage Center inopa nhoroondo uye mamiriro kubva kuViking Age. Uye vatambi vanobva kuNorse Mythology vanobatanidzwa muchivande mune dhizaini, vachipa vashanyi vanoda kuziva pamwe nekurudziro yekuenderera mberi vachiongorora Viking's Nordic nhaka.